पालुंटारमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र गोरखालाई अबसर - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
पालुंटारमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र गोरखालाई अबसर
Published On : ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:००
औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडले पालुंटार नगरपालिकाको च्याङ्लीमा स्थापना गर्न लागेको प्रदेश ४ स्तरिय औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा स्थानीय सँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाब्यता सुरु हुनै लाग्दा केही विचौलियाहरु सल्बलाईसकेका समेत थिए । अहिले वातावरण राम्रो बन्दै गएको लिमिटेडले जनाई सकेको छ । पालुंटार अथवा गोरखाको यो तल्लो भाग नेपालकै मध्य भूमाग भएकोले पनि यहाँ स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रले समग्र गोरखा सँगै प्रदेश ४ र नेपाललाई नै आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धी हुनेछ । जिल्लाका राजनितिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु सबैले एक जुट भएर पालुंटारमा बन्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको लागि पहल कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ । केही दिन भित्रै स्थानीयहरुसँग लिमिटेडले प्रत्यक्ष छलफल गर्ने बताइसकेको छ । स्याङ्जामा बन्न लागेको उक्त औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ जग्गा पर्याप्त नभएपछि गोरखा सरेको हो । त्यसैले गोरखालीहरुले यस अबसरलाई खेर फाल्न हुँदैन ।
लिमिटेडले स्थानीय जनताहरुले वातावरण प्रदान गरे आवश्यक जग्गा पुग्ने बताइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र भएपछि स्थानीय स्तरमा हुने विकासस, समृद्धिको बारेमा जानकारी गराएर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रशासन, नेता तथा जनप्रतिनिधीले अझ सहताको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तब, मात्र गोरखाको समृद्धिको ढोका खुल्नेछ ।